दलान नेपाल : 2019
आपसमै सशंकित समाजवादी-राजपा
at 5:35 AM Posted by Dalan
गत साताको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपश्चात समाजवादी र राजपा आपसमा संशकित भएका छन्। मधेसीको अधिकारका लागि सँगै आन्दोलन गरेका यी दुई दल प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन्। गएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुवैले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए। पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणकै प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका यी दुई दल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपश्चात एक अर्का प्रति सशंकित अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका छन।
उपेन्द्र यादवद्धारा कानुन मन्त्रालयमा पद बहाली
at 7:27 AM Posted by Dalan
उपप्रधान, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले आफू संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको बताएका छन् । आफूसँग सत्तारुढ दल नेकपाका दुई जना अध्यक्षले गरेको सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भन्दै उनले अब त्यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आइपुगेको बताए । सोमबार कानुन मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री यादवले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण र विधिसँग सरोकार राख्ने ठाउँमा आइपुगेको बताए । मन्त्रालय हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रहेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यो पोलिटिकल कुरा, डिसिजन भएर अगाडि बढ्ने हो, संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुईवर्ष अगाडि नै हस्ताक्षर भइसकेको हो, अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन बेला आएको छ।’
समाजवादी पार्टीले सरकार नछाड्ने
at 4:19 AM Posted by Dalan
समाजवादी पार्टी सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएको छ। पार्टीको शनिबार अबेर रातिसम्म बसेको बैठकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सत्तारुढ नेकपासँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पार्टीले असहमति जनाएको छ। गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि समाजवादी पार्टी रुष्ट बनेको थियो। सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै बसिरहने समाजवादीले शनिबार छलफल थालेको हो। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय हेरफेर गरेपछि उनी असन्तुष्ट छन्।
दबाबमा उपप्रधानमन्त्री यादव
at 12:16 AM Posted by Dalan
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रुष्ट भएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर उनी डेढ वर्षअघि सरकारमा सहभागी भएका थिए। तर सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको पहल नगरेको र सरकारले गरिरहेका विभिन्न नियुक्तीमा समेत उनलाई कुनै भागबन्डा नदिँदा उनी आफ्नै पार्टीको दबाबमा परेका छन्। आफूसँग छलफल नगरी प्रदेश २ मा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि यादव मंगलबार अचानक जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतसँग छलफल गरे। उनले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका प्रदेश प्रमुख विजय यादवसँग समेत छलफल गरे। छलफलपछि उनी बुधबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भए।
राजपाद्धारा पार्टीको अन्तरिम संरचनाहरु निर्माण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक
at 5:01 AM Posted by Dalan
राजपा नेपालले कार्तिक मसान्त भित्र पार्टीको स्थानिय तह र जिल्ला तहको अन्तरिम नयां संरचना निर्माण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले अन्तरिम संरचनाहरु निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै जिल्लाहरुलाइ निर्देशन समेत दिएको छ । राजपाले वडा, पालिका, क्षेत्रिय र जिल्ला तहमा अन्तरिम संरचना बनाउन सबै जिल्लामा तयारी सम्बन्धी बैठक आउदो १९ गर्ने भनेको छ । त्यस पछि २४ गते वडा स्तरीय, २६ गते पालिका , २८ गते क्षेत्रिय र ३० गते जिल्ला तहमा सम्मेलन गरेर अन्तरिम तर्थद संरचनाहरु निर्माण गर्न भनेको छ ।
at 6:07 AM Posted by Dalan
अध्यक्ष–मण्डलद्वारा सञ्चालित राजपा नेपालको पार्टी जीवन अवस्था लथालिंग छ। राजपाको अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना नेताहरू छन्। अढाई वर्षअघि तात्कालीन मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दलहरू एकिकरण गरेर राजपा नेपाल गठन गरे पनि एकिकृत पार्टी व्यवस्थित हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि दुई महिनाको चक्रिय प्रणाली लागु गरे पनि राजपाको पार्टी कार्यलयदेखि तल्लो निकायसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। पार्टीको एकता महाधिवेशनका लागि एक वर्ष अगाडि सुरु गरिएको सदस्यता वितरण अभियानलाई आन्तरिक किचलो कै कारण राजपाले अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमै गत वर्ष लफडा देखिएपछि राजपाले आफ्ना पार्टीका कर्मचारीहरू नै निष्कासनसम्म गर्नुपरेको थियो ।
टर्‍यो राजपा-समाजवादी एकीकरण
पछिल्लो समय राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच भइरहेको एकीकरण प्रयास टरेको छ। गत शुक्रबार दुई दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको कुराकानीमा समाजवाद पार्टीले आरम्भमा गरेका शर्तबाट पछि हटेका कारण एकीकरण टरेको राजपा नेपालका नेताले बताएका हुन् । समाजवादी पार्टीका नेताले भने त्यसबारेमा मुख खोलेका छैनन्। शुक्रबार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवास हात्तीवनमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो। समाजवादीका तर्फबाट यादवसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए भने राजपा नेपालको तर्फबाट राजेन्द्र महतो थिए। संयोजक महन्थ ठाकुर पनि जाने बताए पनि स्वास्थ्यका कारण उपस्थित भएनन्।
समाजवादी पार्टीमा सरकारबाट बाहिरिन दबाब
at 4:02 AM Posted by Dalan
उपप्रधानमन्त्री पद लिएर सरकारमा सामेल भएको समाजवादी पार्टीभित्रै सरकारबाट बाहिरिन दबाब बढ्दै गएको छ। डेढ वर्षअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षसँग संविधान संशोधन गराउने हस्ताक्षर गराएर सरकारमा गएका समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अहिले दबाब बढ्दै गएको छ। गत वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरणपछि नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर सरकारबारे आधिकारिक धारणा बनाउने सहमति भएको थियो । समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले कात्तिकको २९ र ३० गते बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारेमा धारणा तय गर्ने बताए। बैठक बसेमा एकीकरणपछिको पहिलो बैठक हुनेछ। पार्टीे पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कात्तिक २८ गते संघीय परिषद्को बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा संघीय परिषद्को अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता उपेन्द्र यादवले गर्ने व्यवस्था छ।
समाजवादी र राजपाबीच घोचपेच
at 3:54 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा एकीकरणको तयारीस्वरूप अनौपचारिक रूपमा तीव्र संवाद गरिरहेको समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको शीर्ष तहको नेताको बीचमा घोचपेच हुन थालेको छ। केही महिनायता यी दुई पार्टीका नेताबीच पार्टी एकीकरणका लागि अनौपचारिक तवरमा संवाद चलेको थियो। राजपा नेपालबाट अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतो र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले यो अनौपचारिक वार्ताको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तर गएको २३ असोजमा सप्तरीको राजविराजमा पार्टीले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपाप्रति व्यंग-कटाक्ष गर्दैै एकीकरण नगरे राजपा सिध्ने चेतावनी दिए। उनले राजपा पार्टी चल्नै नसक्ने दाबी गर्दै समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको विकल्प नभएको दाबी गरे।
समाजवादी पार्टीलाई पन्जा र जनमत पार्टीलाई लाउडस्पीकर चुनावचिन्ह्
at 6:37 AM Posted by Dalan
समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले पन्जा चुनाव चिन्ह् दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई लाउड स्पीकर चुनाव चिन्ह् दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । गएको बैशाखमाडा बाबुराम भटराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी एकिकरण भएर समाजवादी गठन भए पछि नयां चुनाव चिन्ह्को माग उनीहरुले गरेका थिए । त्यसैगरि गएको फागुनमा मुलधारको राजनितीमा आउने निर्णय गरेको राउतले बैशाखमा नयां पार्टी गठन गरे पछि उनलाई आयोगले निर्वाचन चिन्ह् दिने निर्णय गरेको छ ।
भारतद्धारा कुलेश्वर मावि निर्माण
at 6:21 AM Posted by Dalan
भारत सरकारको ३ करोड ८६ लाखको सहयोगमा काठमाडौ १४ स्थित कुलेश्वर आवास माध्यमिक विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । शनिवार भारतीय सहयोयमा निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालय जिल्ला समन्वय समितिको रोहवार कुलेश्वर आवास परिवार कल्यान संस्थानलाई हस्तानान्तरण गरिएको छ । हस्तानान्तर कार्यक्रममा काठमाडौ स्थित भारतीय दुतावासका उपप्रमुख डा. अजय कुमार सहित संस्थानका पदाधिकारीहरु र जिल्ला समन्वय समिति काटमाडौका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
गुरु नानकको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सिक्का सार्वजनिक
at 10:18 AM Posted by Dalan
नेपाल राष्ट बैकले गुरु नानकको सम्झनामा उनी अकिंत सिक्का शुक्रवार सार्वजनिक गरेका छन । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय दूतावासको संयुक्त आयोजनामा ​​काठमाडौमा भएको कार्यक्रममा उक्त सिक्काहरु सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा गुरु नानक देवजीको ५५० औं जयंती समेत मनाइएको छ । उक्त सिक्का नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवी नेपाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले संयुक्त रुपमा लन्च गरेका थिए।
काठमाडौंमा भारतीय संविधानको धारा ३७० को चर्चा
भारतीय संसदले हालै हटाएको संविधानको धारा ३७०को बारेमा नेपालमा पनि चर्चा भएको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतका प्रचार प्रमुख अरूण कुमारको उपस्थितिमा नेपालमा पनि यस विषयमा चर्चा भएको हो। भारतमा बुधवारबाट तथा संसारभर आफ्नो दुतावास भएको देशमा धारा ३७०को बारेमा चर्चा शुरु भइरहँदा नेपालमा पनि यस बारेमा विमर्श भएको हो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र नेशनल ल कलेजले संयुक्त रूपमा गरेको भारतको संविधानको धारा ३७० बोध र यथार्थ बिषयक कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतका प्रचार प्रमुख अरूण कुमारले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा संविधानको अस्थायी प्रावधानका रुपमा रहेको धारा ३७० हटाइएको बताए।
भुक्तानी रोके पछि प्रदेश २ सरकार माथी छानविन हुदै
at 7:38 AM Posted by Dalan
प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको करिब २ हजार योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नदिइएपछि छानबिन सुरु भएको छ। सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी कमिसनको कारण रोकिएको आरोप लाग्न थालेपछि प्रदेश २ को संसदीय समितिले छानबिन थालेको हो । समितिले योजना निर्माण स्थलमै पुगेर मूल्यांकन सुरु गरेको छ। इन्जिनियर र ओभरसियरसमेत सहभागी रहेको सांसदका ६ वटा टोलीले कामको मूल्यांकन थालेको हो।
संविधान संशोधन पछि मात्रै स्वागत गरिने - राजेन्द्र महतो
at 8:31 AM Posted by Dalan
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन हुनुपर्ने मुद्दामा आफूहरूको संघर्ष जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । राजपा सिरहाका नेता रामबहादुर महतोको १३ औँ दिनको पूण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभामा नेता महतोले संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधानको स्वागत गर्न नसकिने बताए । उनले संविधान संशोधन भएमात्र स्वागत गरिने बताए । मधेशी जनताको हकअधिकार अझै सुनिश्चित भई नसकेको उनको धारणा थियो ।
राजपा संयोजकमा पुन महन्थ ठाकुर
at 7:42 AM Posted by Dalan
राष्टिय जनता पार्टी, नेपाल– राजपाको संयोजकमा पुन महन्थ ठाकुर चयन भएको छ । सोमवार राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले पार्टीले अंगालेको चक्रिय प्रणली अनुसार ठाकुरलाई पार्टी संयोजकको जिम्मा दिइएको हो । सोमवारको बैठक पछि यस अघि संयोजकको जिम्मा सम्हाल्दै आएका राजकिशोर यादवले विज्ञप्ती निकालेर ठाकुरलाई उक्त जिम्मा दिइएको जनाएको छ । राजपामा दुई महिनाको चक्रिया प्रणली अनुसार ठाकुर ११ महिना पछि पार्टी संयोजकको जिम्मा पाएका हुन । साढे तीन बर्ष अगाडी तात्कालिन ६ ओटा मधेशी पार्टी एकिकरण गरेर राजपा नेपाल गठन भए पछि ठाकुरले संयोजकको जिम्मा सम्हाल्दै आएको थियो । तर पार्टीको नेतृत्वमा तहमा असन्त्ुष्टि चुलिए पछि एकिकरणको बेला सहमती अनुसार चक्रिय प्रणलीमा संयोजक रहने व्यस्था राजपाले गएको मंसीर पहिलो हप्ता गरेको थियो । बहुमतद्धारा उक्त निर्णय भए पछि राजपाको संयोजकको जिम्मा राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवले सम्हाली सकेका छन ।
राजपामा लिम्बुवान बिध्यार्थी र खम्बुवान युवा मन्च समाहित
at 6:26 AM Posted by Dalan
पुर्वी पहाडमा सक्रियमा रहेको लिम्बुवान बिध्यार्थी तथा खम्बुवान युवा मन्च संयुक्त रुपमा राजपा नेपालमा समाहित भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रदेश १ का युवा अध्यक्ष रोशन लिम्बुको अगुवाईमा भएको कार्यक्रममा प्रदेस १ भित्र रहेका लिम्बुवान बिध्यार्थी र खम्बुवान युवा मन्च संयुक्त रुपमा राजपामा समाहित भएको घोषणा गरेका छन । राजपाको केन्द्रिय पार्टी कार्यालयमा आयोजित एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सभापति रोशन लिम्बू प्रमुख अतिथी राजपा अध्यक्ष मण्डल नेता राजेन्द्र महोत्तोको थियो भने लिम्बुवान बिध्यार्थीका केन्द्रिय अध्यक्ष अशोक छेत्री र खम्बुवान युवा मन्चका संयोजक फलिद राईको उपस्थिति थियो ।
संविधान विरुद्धमा काठमाडौ सहित तराई-मधेशमा प्रर्दशन
at 8:10 AM Posted by Dalan
संविधान जारी भएको ३ असोजलाई सम्झदै आदीवासी,जनजाती, थारु सहित मधेशी समुदायहरुले शुक्रवार काठमाडौ सहित देशका विभिन्न भागमा विरोध गर्दै प्रर्दशन गरेका छन । काठमाडौमा विभिन्न समुदायका अगुवाहरुको अगुवाईमा संविधान विरुद्ध प्रर्दशन गरिएको थियो । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा राजपा नेपालले आब्हान गरेको विरोध प्रर्दशन सहित ब्लयाक आउट गरिएको छ । थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको अगुवाईमा टिकापुर सहित पश्चिम तराई मधेशका जिल्लाहरुमा संविधान विरुद्ध प्रर्दशन गरिएको छ ।
मधेशमा ब्लायक आउट हुन्छ - राजेन्द्र महतो
at 7:57 AM Posted by Dalan
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले संविधानले मधेसबासी जनताको भावना नसमेमेटको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन समापनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै नेता महतोले संविधान दिवस असोज ३ गतेका दिन मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने बताए । अमेरिकामा संविधानलाई कयौँ पटक संशोधन गर्दैै सबै नागरिकलाई अधिकार दिएर विश्वकै समृद्ध भएको उनले बताए । महतोले एकल जातीय अहंकारबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने माग गरे। संविधान संशोधन नगरी मनाइने संविधान दिवस गाईजात्रे हुने उनले तर्क गरे।
प्रदेश सरकारको फजुल खर्च
प्रदेश २ को सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी काममा गरेको लाखौं रुपैयाँको नतिजा शून्य छ । स्वयंसेवकमा कर्मचारी भर्ना र सल्लाह–सुझाव संकलनका नाममा खर्चिएको लाखौं रुपैयाँको नतिजा बेकामे बनेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि आह्वान गर्‍यो । स्वयमसेवकका लागि विज्ञापन निकालेर प्रदेशका ८ जिल्लाबाट आवेदन लियो । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले आवेदन संकलन गरी मौखिक परीक्षा लिए । तर, नतिजा सार्वजनिक गरेनन् ।
नेकपामा मधेस मतभेद
at 6:39 AM Posted by Dalan
नेकपाको मधेस पार्टी कमिटीमा विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेताबीचको गुटका कारण प्रदेश २ मा पदाधिकारीमै विवाद छताछुल्ल भएको हो। पूर्वमाओवादीका प्रभु साह र मातृका यादव पक्षबीच अन्तरविरोध चुलिएको छ। दुवै जनाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेता मान्छन् । मधेसमा भने उनीहरू आआफ्नो समूह बनाउन क्रियाशील छन्। पूर्वएमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि मिलेका छैनन्। पार्टी एकतापछि ओली र साह एकातिर र यादव र नेपाल अर्कातिर देखिएका छन्। यही समीकरणका आधारमा नेताहरूले संगठनात्मक भागबन्डा खोजी गर्दा विवाद बढेको हो। यसले गर्दा प्रदेशका आठमध्ये तीन जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीको शपथ रोकिएको छ।
संविधान दिवस छल्न उपेन्द्र यादव अमेरिका जाँदै
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र्र यादव संविधान दिवसका लागि सरकारले आयोजना गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएको ३ असोजलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। संविधान दिवसलाई पर्वका रूपमा मनाउन सरकारले सर्वसाधारणलाई घरघरमा दीपावली गरी मनाउन आह्वान गरिरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री यादव भने दिवस छल्न अमेरिका उड्ने तयारीमा छन्।
३ असोजमा ब्लायक आउट पनि
at 8:32 AM Posted by Dalan
सविधान दिवसको दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा नेपाल र लोक दलले ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७२ असोज ३ गते मधेशी जनतालाई दमन गरेर संविधान जारी गरेको र त्यो सविधानलाई अझै संशोधन नगरेको भन्दै त्यस दिनको सम्झनामा विरोध दिवस मनाउनुको साथै साँझामा ब्ल्याक आउट, बत्ति निभाउने गर्ने निर्णय भएको राजपा नेपालका सहमहामन्त्री संजय यादवले बताए ।
मधेश आन्दोलनका एक दर्जन व्यक्तिको मुद्धामा अदालतद्धारा सफाई
at 6:16 AM Posted by Dalan
तेश्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको जानकी मन्दिरमा रहेको प्राचिन स्मारक तोडफोडको मुद्दाको फैसला आज भएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले जानकी मन्दिरको गृहगर्भमा गएर प्राचीन स्मारक तोडफोड मुद्दाको अभियोग प्रमाणित नभएकाले करिब एक दर्जनले आइतबार सफाई दिएको हुन् ।
संविधान दिवसलाई लिएर मधेशी पार्टी विभाजित
at 8:13 AM Posted by Dalan
संविधान दिवस मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा तराई/मधेसकेन्द्रित दल विभाजित छन् । समाजवादी, राजपा र सीके राउत नेतृत्वको दलबीच यसबारे मतैक्य छैन । राजपाको अध्यक्षमण्डल बैठकले हालै असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मनाउन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा थिए । संविधान संशोधन नभएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहने राजपा संयोजक राजकिशोर यादवले बताए । ‘यो संविधान हाम्रो अधिकार कटौती गरी ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘हामीले यसलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरेका छैनौं ।’ समाजवादीको धारणा भने फरक छ । वरिष्ठ नेता अशोक राईका अनुसार संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तर विरोध प्रदर्शन पनि नगर्ने रणनीति पार्टीले बनाएको छ । ‘संविधान संशोधनको एजेन्डामा हामी अडिग छौं’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन पार्टीको एजेन्डा भएकाले संविधान दिवसमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’
पहाड चढ्‍दै सिके राउत
at 6:49 AM Posted by Dalan
स्वतन्त्र मधेसको राजनीति परित्याग गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सिके राउत संगठन निर्माण गर्न पहाड चढेका छन्। गएको फागुनमा सरकारसँग सम्झौता गरेर विखण्डकारी राजनीति परित्याग गरेका राउतले मुलधारको पार्टी बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले जनमत पार्टीको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । आयोगमा दल दर्तासँगै पार्टीको संगठनमा जोड दिँदै आएका राउतले तराई मधेसका २२ जिल्लासँगै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा समिति बनाइसकेका छन्। १, २ र ५ बाहेकको संगठन विस्तार पहाड केन्दित छ। प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मासमेत जनमत पार्टीले संगठन विस्तार गरिरहेको छ।
काठमाडौमा पार्टी कार्यलय खोल्दै त्रिपाठी
at 8:22 AM Posted by Dalan
नेकपासंगको सहकार्यमा निर्वाचनमा भाग लिएका नेता हृदेश त्रिपाठी काठमाडौमा सम्पर्क कार्यलय खोल्न लागेका छन । राजपामा असन्तुष्ट बने पछि त्रिपाठी ‘स्वतन्त्र राजनितीक समुह’ बनाएर तात्कालिन एमाले संग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस यता उत्री नेकपामा जाने पटक पटक चर्चा चले पनि मंगलवार बसेको उनको समुहको बैठकले काठमाडौमा पार्टी कार्यलय खोल्नुको साथै जिल्ला र प्रदेश तहमा स्वतन्त्र राजनितीक समुहकै नामा संगठन बनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्धारा काठमाडौमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय
at 8:14 AM Posted by Dalan
डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको केन्द्रीय वैठकले १८ वटा निर्णय गरेको छ । वीञ्गजमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका ४५ वर्ष पुरा गरेकाहको ‘वरिष्ठ नेतृत्व मण्डल’ गठनको तयारी पनि जनमत पार्टीले गरेको छ।
असोज ३ मा राजपाद्धारा विरोध प्रर्दशन गर्ने घोषणा
संविधान प्रति असन्तुष्ट रहेको र संशोधनको माग गर्दै आइरहेका राजपा नेपालले संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिन घोषणा गर्दै देश व्यापी विरोध प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले ३ असोजमा देश व्यापी प्रर्दशन गर्नुको सार्थ उक्त दिनलाई कालो दिन भनिने निर्णय गरेको बैठक पछी संयोजक राजकिशोर यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
चुलिदै राजपामा विवाद
राजपा संयोजक राजकिशोर यादवले पार्टीको राजनीतिक समिति बैठक बोलाएपछि राजपामा विवाद चुलिएको छ। संयोजक यादवले अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्यहरुसँग परामर्शसमेत नगरी बैठक बोलाएको भन्दै यादव इतरका अध्यक्ष मण्डल सदस्यहरुले आपत्ति जनाए । यादवले शुक्रबार र शनिबार बस्नेगरी दुई दिने राजनीतिक समिति बैठक डाकेका हुन्। यसअघि यादवले गत २ भदौमा बोलाएको अध्यक्ष मण्डल बैठक पनि बस्न सकेको थिएन। यादवले बोलाएको अध्यक्ष मण्डल बैठकमा नेताहरु राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी नगएपछि बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि रुष्ट बनेका संयोजक यादवले अन्य सदस्यहरुसँग सामान्य परामर्श नै नगरी १३ र १४ भदौमा बस्नेगरी राजनीतिक समिति बैठक डाकेका हुन्।
बैठकलाई लिएर राजपामा असन्तुष्टि
at 8:11 AM Posted by Dalan
राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपानेपालका संयोजक राजकिशोर यादवले अन्य अध्यक्षसँग परामर्श नगरिकन राजनितीक समिति बैठक बोलाए पछि पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यादवले अध्उक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा बाहेक अन्य अध्यक्षसँग छलफन नै नगरी शुक्रबार र शनिबार राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको भन्दै राजपाका अन्य ने्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन । ‘उहाँलाई राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउने अधिकार नै छैन, राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउँदा उहाँले अरु अध्यक्षसँग छलफल समेत गर्नुभएको छैन’, एक अध्यक्ष मण्डल सदस्यले भने, ‘यो बैठक कुनै हालतमा बस्न सक्दैन।’
समाजवादी पाटीको युवा संघमा यादव
at 9:49 AM Posted by Dalan
समाजवादी पार्टी नेपालका भातृ संगठन समाजवादी युवासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा प्रदेश नं २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव मनोनित भएका छन । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित याक्थुङ चुमलुङ सभाहलमा आयोजित किराँत नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन र समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालको एकता घोष्णासभाले समाजवादी युवा संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा राज्यमन्त्री यादवलाई चयन गरेको हो ।
थारु सम्मेलनद्धारा असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने निर्णय
at 9:00 AM Posted by Dalan
कैलालीको टिकापुरमा भएको थारु सम्मेलनले संविधान दिवसको दिन असोज ३ दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । शनिवार देखि टिकापुर भएको थारु सम्मेलन सोमवार सकिएको छ । सम्मेलनले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा समेत गठन गरेको छ । टीकापुर घटनाको चौथौ बार्षीकी पारेर भदौ ७, ८ र ९० मा देशभरका हजारौं थारुहरूको उपस्थितिमा चलेको सम्मेलनले सशक्त आन्दोलन सहितको थरुहटथारुवानको आगामी कार्यदिशा तय गर्दै सम्पन्न भएको हो । मोर्चाको प्रवक्ता मीनराज चौधरीका अनुुसार सम्मेलनले १५ बुँदे टीकापुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
टिकापुरमा थारु सम्मेलन हुदै
at 7:10 AM Posted by Dalan
टिकापुर घटनाको चार बर्ष पुगेको अवसरमा पारेर थारु सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले शनिवार देखि थारु सम्मेलन गर्न लागेका छन । सोमवार सम्म टिकापुरमा हुने थारु सम्मेलनले टिकापुर घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्ने छ । ०७२ साल भदौ ७ गते संविधान प्रति असन्तुष्टि राख्दै भएको आन्दोलनमा टिकापुरमा हिंसात्मक घटना हुन पुगेको थियो । जसमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको समेत ज्यान गए अवस्था तनावपुर्ण बन्न पुगेको थियो । उक्त घटनामा दर्जनौ थारु अगुवा पछि पक्राउ परे भने सयौको संख्यामा विस्थापित भएका थिए ।
प्रदेश दुईको नाम र राजधानीका लागी प्रदेशसभामा चार प्रस्ताव
at 9:17 AM Posted by Dalan
प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन दलहरूले बिहीबार प्रदेशसभामा आआफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राजधानीबारे केही दलमा समानता देखिए पनि नाममा भने सबैका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव छन् । प्रस्तावमा मधेस, जानकी, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेसजस्ता नाम उल्लेख छन्। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राजपाले मधेस प्रदेश राख्न सुझाएका छन्। उनीहरूले राजधानी जनकपुरधाम मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
भारतद्धारा तराई सडकका लागी १ अर्ब २९ करोड सहयोग
at 9:45 AM Posted by Dalan
भारत सरकारले तराईको सडक स्तरोन्नति र निर्माणका लागि नेपाललाई करिब १ अर्ब २९ करोड अर्थात ८०।७१ करोड भारतीय रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। नेपाल-भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बुधवार नेपाल आइपुगेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सुरु भयो नेपाल -भारत संयुक्त बैठक
राजपामा पहिला एकिकरण कि महाधिवेशन ?
at 10:40 PM Posted by Dalan
पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कि समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भन्ने विषयमा राजपा भित्र विवाद देखिन थालिएका छन । महाधिवेशन गर्ने कि समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने भन्ने विषय विवाद बढ्दै गएपछि राजपाका अध्यक्षमण्डलमा रहेका ६ जना सदस्य स्पष्टरूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएर उभिन पुगेका छन्। राजपाका एक नेताले महाधिवेशन कि एकीकरण भन्नेमा राजपाभित्र स्पष्टरूपमा अध्यक्षमण्डलभित्र विभाजन देखापरिसकेको बताए। ‘राजपाका ६ जना अध्यक्षमध्ये ४ जना महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रूपमा उभिन पुगेका छन् भने दुई जना महाधिवेशन रोकी समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणमा जोड गर्दै आएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘सोमबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा त्यो विवाद प्रष्ट रूपमा नै देखियो।’ सोही कारण सोमबारका लागि बोलाइएको अध्यक्षमण्डलको बैठक नै बस्न नसकी स्थगित भएको थियो।
राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक सुरु
at 9:30 AM Posted by Dalan
राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डल बैठक सोमवार देखि काठमाडौमा सुरु भएको छ । पार्टीको महाधिवेशन अनिश्चित देखिए पछि बैठक बस्न लागेको छ । यस अघि बैशाखमा घोषणा गरेरसमेत महाधिवेशन गर्न नसकेको राजपाले कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने अर्को मिती तय गरेको छ ।
सासंद यादवद्धारा राजिनामा फिर्ता
at 8:57 AM Posted by Dalan
सप्तरी १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सूर्यनारायण यादवले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् । उनले आइतबार राजीनामा फिर्ता लिएका समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरबरियाले जानकारी दिए । सांसद यादवले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै २७ साउनमा संसद सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । तर समाजवादी पार्टीले सांसद यादवलाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
‘नेपाल –भारत सम्बन्ध वलियो’
at 8:09 AM Posted by Dalan
नेपाल र भारत विचको सम्बन्ध वलियो रहेको भन्दै विभिन्न पार्टीका नेताहरुले अगामी दिनलाई त्यसलाई थप व्यवस्थीत गर्दै जानु पर्नेमा जोड दिएका छन । भारतको ७३ औ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौमा नेपाल–भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरुले भारतको विगतको ७३ बर्षवाट नेपालले धेरै सिक्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा राजपा नेपालका संयोजक राजकिशोर यादवले दुई देशको सम्बन्ध त्रेयता युग देखि नै वलियो रेहेकमेमा जोड वर्तमानमा आएर दुवै नयां ढंगले समिकक्षा गर्दै अगाडी वढनु पर्नेमा जोड दिए । ‘यो वैश्य युग हो’ यादवले भने – ‘नेपालले आफनो हितलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमानमा भारतसंग अगाडी वढनु पर्ने हुन्छ ।’ उनले भारतको विशाल जनसख्या र वलिषे लोकतन्त्रलाई नेपालले आफनो ठाउमा फाइदा उठाउन सक्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालका समेत प्ररणदायी रहेको भन्दै यी दुई देशको सम्बन्ध कसैले चाहदैमा समस्यामा नपर्ने बताए । राप्रपा एकिकृतको अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले भारतमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन र विकासवाट नेपालले सक्दो फाइदा लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौमा मनाइयो भारतको ७३ औ स्वतन्त्रता दिवस
at 8:07 AM Posted by Dalan
काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासले विहिवार भारतको ७३ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । दिवसको शुभारम्भ नेपालका लागि भारतका राजदूत मंजिव सिंह पुरीले भारतको राष्ट्रिय ध्वजा झण्डोत्तोलन गरेर भएको थियो । राजदूत पुरीले भारतका राष्ट्रपतिकोे सन्देश पढेर सुनाउदै गएको ७२ वर्षमा भारतले विविध क्षेत्रहरुमा प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू बारे जानकारी दिएका थिए । राजदूतद्वारा तीन वीर नारी, पाँच एकल महिला, ६ मृत सैनिकका निकटतम नातेदारलाई ५ करोड ३१ लाख नगद तथा कम्मल वितरण गरी सम्मान समेत गरियो ।
जिल्लामै अडक्यो राजपाको सदस्यता विवरण
at 8:41 AM Posted by Dalan
राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा नेपालका जिल्ला कार्यसमितिले अध्यक्षमण्डलले दिएको निर्देशन दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जेठको दोस्रो साता बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्य १५ जेठमा सम्पन्न गर्ने तथा जेठ मसान्तसम्म अद्यावधिक गरी केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर साउन मसान्त सम्म कुनै पनि जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रीय कार्यालयमा सदस्यताको ठेली पठाएका छैनन् ।
प्रदेश नम्बर दुईको नामाकरण प्रक्रिया सुरु
at 7:55 AM Posted by Dalan
प्रदेश सरकार बनेको लगभग डेढ् बर्ष बित्न लाग्दा प्रदेश २ को नामांकरण र स्थायी राजधानीको नाम तोक्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका छन । प्रदेश दुईको संसदमा आईतबारदेखि यसको औपचारिक प्रकृया शुरु भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले आईतबारदेखि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गराउने समय निर्धारण गरेको छ । योसँगै प्रदेशका सांसदहरुले आगामी भदौ ५ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउनेछन् । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन गर्दै प्रदेश २ को नामांकरण र राजधानी तोक्ने बाटो खुल्ला गरेको हो ।
राजपा र समाजवादी पार्टीमा अनिश्चित महाधिवेशन
at 9:31 AM Posted by Dalan
राष्टिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजवादी पार्टीले पटक–पटक महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो अनिश्चीत जस्तो देखिएको छ । राजपाले यस अघि गएको बैशाख ७,८ र ९ गते पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर तयारी नपुगेको भन्दै कार्तिकमा गर्ने गरि सारेको छ । कार्तिकमा महाधिवेशन गर्नका लागी महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा मुल तयारी समिति समेत गठन गरे पनि राजपाको उक्त समितिको अहिले सम्म एउटा बैठक समेत हुन सकेको छैन । तीन बर्ष अगाडी तात्कालिन मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ ओटा दलहरु एकिकरण गरेर राजपा नेपाल गठन गरेका थिए । एकिकरणको बेला एक बर्ष भित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर एकिकरणको तीन बर्ष विते पनि राजपाको महाधिवेशन अनिश्चत जस्तै छ । कार्तिकमा गर्ने गरि नयां मिती घोषणा भए पनि राजपा भित्र त्यसको तयारी कुनै देखिएको छैन । अध्यक्ष मण्डलका वर्तमान संयोजक राजकिशोर यादव अव चाडै नै तयारी मुल समितिको बैठक बस्ने दावी गरे । ‘पछिल्लो केहि समय यता हामी पार्टीको आन्तरिक कुराहरु वारेमा लागातार छलफल थालेका छौ’ यादवले भने – ‘अव चाडै नै हामी यसको तयारी सुरु गर्दै छौ ।’
मधेशी आयोगको गोष्ठीमै साढे तीन करोड खर्च
at 8:55 AM Posted by Dalan
मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ४ महिनामै गोष्ठी र अनुशिक्षणको नाउँमा साढे ३ करोड बढी रकम खर्च गरेका छन् । चैत ७ गते अध्यक्षको कार्यभार बहाल गरेका दत्तले ४ महिनामै गोष्ठि अनुशिक्षण कार्यक्रममा ३ करोड ५६ लाख ८१ हजार १ सय ६८ रुपैया खर्च भएको जानकारी सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेका जानकारी दिएका छन ।
सरकारले कुप्रचार गरे - राजपा नेता राजेन्द्र महतो
at 7:50 AM Posted by Dalan
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्ना विरुद्ध भ्रम छर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो नाममा भ्रम फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए । सरकारका प्रवक्ताले राजेन्द्र महतो लगायत ८ जनाको नागरिकता बदर गरिएको भनेर जानकारी गराएको र सोही अनुसार सञ्चारमाध्यमले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरेको भन्दै उनले राज्यले कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
नेपालको आन्तरिक मामिला भारतले हस्तक्षेप गर्दैन - भाजपा नेता
at 10:31 AM Posted by Dalan
भारतीय सतारुढ दल भारतीय जनता पार्टी, भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले नेपालको कुनै पनि आन्तरिम मामलामा भारतले हस्ताक्षेप नगर्ने बताएका छन । शुक्रवार काठमाडौमा नेपाल र भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बाधन गर्दैै चौथाइवालाले नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट भएको र भारत– नेपाल सम्बन्ध बाराबरीको आधारमा अगाडी वढने दावी गरे । केहि दिन अगाडी भारतीय खुपीया संस्था रअको प्रमख नेपालको र अव याहा के के नहुने आशंका रहेको प्रसंग कोटयाउदै उनले नेपालको कुनै पनि मामिला भारत हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार आए देखि नै छिमेकी निती प्राथमितामा रहेको उल्लेख गर्दै अगमी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध थप वलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
समाजवादी पार्टीमा अल्पमत मधेशी
at 8:18 AM Posted by Dalan
मधेश आन्दोलनको आडमा राष्टिय राजनितीमा उदय भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीमा मधेशी समुदायका नेताहरु अल्पमतमा परेका छन । गएको बैशाखमा पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटराईसंग एकिकरण गरे समाजवादी पार्टी बनेको पुर्व फोरमका नेताहरु पार्टीमा अल्पमतमा पर्न थालेका छन । गएको शनिवार समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले गठन गरेको संगठनको विभिन्न विभागहरुमा मधेशीहरु अल्पमतमा परेको देखिएको छ । पार्टीले गठन गरेको २३ वटा विभाग मध्ये ३ वटामा मधेशी, एउटामा थारु र एउटामा मुस्लिम रहेका छन् । अन्य १८ ओटा पहाडी समुदायवाट जिम्मेवारी पाएका छन ।
at 9:07 AM Posted by Dalan
नेकपा र काग्रेसको विकल्पमा राजनितीक शक्ति बनाउने उदघोषका साथ तीन महिना अघि एकिकरण गरेर बनाइएको समाजवादी पार्टीले घोषणा गरेका अनुसार कामहरु हुन सकेको छैन । गएको २३ बैशाखमा तात्कालिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय फोरम र पुर्वप्रधानमन्त्रीको नयां शक्ति विच एकिकरण गर्दै भटराई र यादवले समाजवादी पार्टी बनाएका थिए । एकिकरण पछि केन्द्रिय कार्यलय व्यवस्थापनको काम भए पनि अन्य पार्टीको कामहरु हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारमै उपप्रधानमन्त्री रहेका यादव र पुर्वप्रधानमन्त्री रहेका भटराई दुवै एकिरणसभामा अरु पार्टी जस्तो आफुहरुको नयां पार्टी नरहने र मुलुकलाई सबै कुरामा नयां दिशा दिने उल्लेख गरेका थिए ।